Gburugburu Obodo Dubai, ebe dị ịtụnanya ịga leta ma ọ bụ malite ịrụ ọrụ na UAE
Dubai City Gburugburu
Gburugburu obodo Dubai bụ ebe kachasị mma ị gara ma ọ bụ ọrụ?
Ugbu a, Mpaghara Dubai na-enwe ebe dị ịtụnanya, a makwaara ya nke ọma Dubai City foto na ọrụ n'ezie. Dịka ọmụmaatụ, onye ọ bụla ọ bụla ga-ahụ n'anya chọta ọrụ Ebe ahụ. N'ezie, ọrụ na ụlọ ọrụ na Dubai n'ezie dị ịtụnanya. Ihe siri ike, anyị na-agba mbọ ịkọwa ya na nchịkọta, nchịkọta na akwụkwọ ọrụ na nleta visa na Dubai.
Na-ekwukarị kwa ọnwa Ndị na-achọ ọrụ Dubai na-etinye ụbọchị ole na ole ma ọ bụ izu na hel mgbe ha Mee nyocha ọrụ na UAE. Maka nzube ịchọta ihe atụ ahịa ọrụ na Dubai ya na ugwo obodo. Iji mee ya n'ụzọ dị iche, ọ bụrụ na ị bụ enyi ibe m na nke ahụ bụ njem nke atọ gị na Emirates. M ga-agwa gị na mbụ ọ bụ ike ma ọ bụrụ na ị malite iji mpaghara WhatsApp.
Na uche ka dokwuo anya na mbanye ụlọ ọrụ na Dubai na-enweta ego maka ọrụ ha na-enye. N'okwu a, ọ dịkwuo mkpa ka ị mata, ihe na-atọ ụtọ karị ụlọ ọrụ na Dubai i gha ahu. Ọrụ a kapịrị ọnụ na mpaghara ndị dị ka Middle East ga-ewe mgbalị oge ọbụna maka mmepe Dubai na maka ọrụ ile ọbịa.
Uzo esi aga na Dubai maka oru?
N'ụzọ doro anya, ụzọ dị mfe dị mfe: Download ngwa ugbu a! site na ulo oru ulo oru Dubai Careers. N'ezie ọrụ na Dubai na ị ọhụrụ onye na-achọ ọrụ ọ dị mkpa ịnweta ngwa ngwa ịchọta ma tinye maka ọrụ na obere oge. N'ihi na n'okwu ọ bụla, ị ga-eji ọtụtụ awa gaa chọta ụlọ ọrụ mbanye na UAE. Site na Nchịkwa 35 + nke ọchịchị, ị nwere ike ịnweta ọtụtụ ihe karịa gị.
Ndị na-arụ ọrụ na Dubai bụ nzọụkwụ mbụ gị iji mee nke ọma
Ọ dị mkpa ịghọta gị gaa na search n'ihi na arụ ọrụ na Dubai ọ bụ ihe okike ịkọwa ohere gị inweta ọrụ na Dubai. N'ihe niile, ọ bụghị ihe ijuanya ọrụ na Abu Dhabi. N'ebe ahụ, ị ​​nwere ike iju anya maka obodo ọhụụ ikuku nwere n'etiti ọzara. Ma dịka ọmụmaatụ, nọrọ na Dubai ma ọ bụ Abu Dhabi na inweta ọrụ ọ ga-akọwa nkụda mmụọ.
Ọrụ na Dubai City Mpaghara Bulite Resume
Ihe ọzọ dị mkpa maka Ọrụ na Dubai njem bụ inwe enyi nke bi n'obodo ahụ ma nwee ike ịkọwaara gị ya otu esi ejikwa ngwa oru n'ahịa. N'ebe dị mma ị nwere 7 Emirates na Dubai City Gburugburu. Lee ọtụtụ ihe banyere ya karịa naanị ịchụgharị nchụso ọrụ na jikọọ ma zipụ CV ka ndị na-akpọ ọrụ na Dubai. Iji chịkọta ihe ị ga-ekweta, ọ bụ ihe dị ịtụnanya nke emere obodo ahụ Ya Mohammed bin Rashid Al Maktoum ebe ị nwere ike idu ndụ dị ezigbo mma! Kpọtụrụ Onye Ọdị Elu Ya site na email.
Obere ntakịrị banyere Dubai obodo na Sharjah. O doro anya, ọ bụ obodo ntakịrị ọzara naanị 50 afọ gara aga ma si n'ebe ahụ amalitela ịghọ obodo dị elu. Na nkenke nke ahụ bụ azụmahịa na ọdịbendị omenala na Middle East ka Gaa Dubai ma chọpụta ozi ndị ọzọ banyere ihe kachasị njem nleta mara mma na nbanye na 2018- 2019. Maka foto kachasị elu na 1960s na 1970s, n'ụzọ dị mkpa, anyị ga-achọ igosi gị obodo ahụ dịka ọganihu Desert: Ụlọ elu Towertower dị n'akụkụ Deira guzo gburugburu ájá. Ị nwere ike ịmata ebe a ?.
Obodo ime obodo Dubai abụghị naanị ebe nchọta ọrụ, ebe ahụ dị ịtụnanya ọ maara nke ọma maka ịzụ ahịa ịzụ ahịa, karịsịa, ịhụnanya ụmụ nwanyị nwere ihe owuwu oge a na ebe a na-ebi ndụ abalị. Ihe omuma Burj Khalifa, ya na 830m nke kachasị elu n'ụwa, na-achịkwa mbara igwe jupụtara na skyscraper. Ahịa ịre ụlọ ahịa na njem na-eme ka akụ na ụba na ọkwa dị elu. N'ihi nke a, ọ dị ka ọ nweghị njedebe arụ ọrụ ma kwụọ ụgwọ nke ọma ahịa ọrụ na obodo Dubai arụ ọrụ ọhụrụ na ihe karịrị ọrụ ndị dị na UAE WhatsApp.
Obodo dị na Dubai City pụrụ iche maka ọrụ Dubai
Ya mere, ụlọ ọrụ Dubai City na-achọ ịkọrọ ụfọdụ ihe omuma banyere ihe omuma. Nakwa ozi ndị njem nleta na otu esi agbasa obere Dubai ị hụrụ n'anya n'obodo a. I nwekwara ike ịchọtakwu banyere Ọrụ gulf na ụlọ ọrụ dị elu n'ebe ahụ. Ya mere, lee anya na ọrụ ụlọ ọrụ na ozi gbasara anyị. N'aka nke ọzọ, ị ga-elekwa ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ anya. Careerjet na-akwụ ụgwọ Dubai na Nnukwu uzo n 'onu ogugu ndi ozo bu ebe ndi mmadu choro. Ha bara uru ka itinye ha na CV gị.
Ezumike mara mma na Burj Al Arab
Ụlọ nkwari akụ ahụ na-eji ọlaedo zuru ezu iji kpuchie Mona Lisa ese foto 46,265.
Mpaghara Obodo Dubai dị ịtụnanya ihe akaebe kachasị emetụ bụ ime nke Burj Al Arab. Knownlọ nkwari akụ a bụ ụwa ama ama na usoro Ọrụ ọbịa Arab. Ọrụ Arab ọbịa, ma ọ bụrụ na ị ga-aga UAE maka oge mbụ, nwere ike ịmalite inwe ahụmahụ dị egwu. Nke a mara mma na gburugburu 1,790 mita mita nke 24-carat gold leaf. Site n'igwe a, i nwere ike ikpu ihe osise 46,265 Mona Lisa. Ọrụ na nkwari akụ Burj Al Arab na Dubai.
Otu n'ime ihe ọ bụla 4 cranes n'ụwa dị na Dubai City
Dubai City Gburugburu ka na-eto eto kwa ubochi n'uzo siri oke. Dubai City nwere ihe karịrị 32,000 rụpụta kranụ. Ya mere ngwa ngwa na 24-28 pasent niile nke cranes dị emi odude ke UAE.
Site na Burj Khalifa ma Jumeirah Beach
Gaa Dubai Marina. Ga World Island. Gaa Dubai Fiesta. Dubai nwere ya niile iji dọta ndị njem. Know mara na Mwube n’elu agwaetiti nkwụ bidoro na 2001 ma na-ewu agwaetiti Palm Islands nke Dubai chọrọ naanị 94 nde cubic mita nke ájá? Oge ahụ bụ oge ịchọta ọrụ na Ụlọ ọrụ obodo dị na Dubai. A na-eji agwa apịtị dị n'oké osimiri wụchie nkwụ ahụ. Isi ihe a na-elegharakarị Palm Jumeirah bụ nke sitere na cubic 3,257,212,970.389 ụkwụ nke United Arab Emirates oké osimiri ájá vibro-compacted n'ime otu ebe dị ịtụnanya [isi iyi: The Palm Jumeirah]. Karịsịa Vibro-compaction na-eme ka njupụta nke ájá rụrụ arụ dịkwuo elu site na iji jets na egwuregwu mmiri ndị ọzọ jupụta ya ma jiri ndị ọrụ mba ụwa na-emegharị ya. Know mara ihe anyị pụtara na nke ahụ?
Ndị nlekọta kacha baawanye n'ụwa
Na-ekwu okwu banyere ya Dubai Palm Jumeirah Ewuworịala ọtụtụ ime obodo dị oke ọnụ na TOP OF THE HERE ỌR SH ỌR and hotelsWA na hotels jupụtara ndị njem. Site na ụfọdụ ndị na-azụ ahịa n'oge gara aga na-eme mkpesa sitere na 2001- 2017 na oghere ndị ahụ dị obosara karịa ka a na-eduzi ha ịmepụta.
N'ikpeazụ, ndị na-azụ mba ụwa bụ ngwakọta nke Europe, Australia, India, na USA ndị na-achụ ego ogologo oge onye gbazite ya maka ndi bi na ya, ndi ezumike na ndi n’ile anya na ha nwere ego na oke onu ahia mgbe Ngosipụta 2020 ga-amalite otú ahụ Bulite CV na Companylọọrụ Dubai.
Nchekọ ego na Dubai City ma ọ bụ Qatar?
Mgbe agwaetiti ahụ zuru ezu, Sheikh Nakheel na-atụ anya 120,000 ruo ndị bi n'ógbè 150,000. Uche ụwa nke ụfọdụ n'elu VC investors iji chọpụta ihe ha na-achọ n'ezie na UAE na Qatar dịka "azụmahịa" azụmaahịa na UAE. Gụkwuo dị ka 20,000 ruo ndị njem 30,000 otu ụbọchị. Ndị ọrụ na-arụ ọrụ India biri na obere na na ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri na nso nso Dubai City Gburugburu ka m na-ewu agwaetiti a dị ịtụnanya. Okpomoku nke ala di na nchigha nari 37 nde.
Ndị uweojii na-ahụ maka ndị uweojii na-ahụ maka ndị ọzọ
Karịa Onye ị hụrụ n'anya site na ihe nkiri TV. Yabụ lee anya na ụgbọ ala ndị uwe ojii Dubai n'okpuru. Ndị uwe ojii Dubai nwere ọtụtụ ndị egwu karịa ka ị nwere ike ịgụta. Ọ dị mma, mara ụdị ndị dị ebe ahụ ogologo oge. Foto nke ụgbọ mmiri ndị uwe ojii Dubai dọwara na ngalaba ndị uwe ojii na-adọba ụgbọala.
Ndị uweojii Dubai si na 2001 na-eji ụyọkọ ụgbọ mmiri ha eme ka ndị njem nleta si n'akụkụ nile nke ụwa gosi na "ọrụ" Dubai City Gburugburu n'ezie bụ. Nke a gụnyere ụgbọ ala dịka Mercedes Benz GL na 700 Horsepower - Audi R8 ($ 280,000) Ferrari FF ($ 500,000), Lamborghini Aventador ($ 397,000) na nnukwu ngwa ngwa Aston Martin One-77 ($ 1.99). N'akụkụ aka nke ọzọ, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịrụ ọrụ na Mercedes Benz ị nwere ike gụọ ihe ntanetị ọzọ na ụlọ ọrụ anyị.
80% siri ike nke ndị na-achọ ọrụ Dubai sitere mba ọzọ
Dị ka achọpụtala na gburugburu 17 pasent nke A mụrụ ndị bi na Dubai na Dubai City, ebe ibe 83 nke ọzọ dị ndị si mba India, Pakistan, Europe, na mba ndị ọzọ. Ọtụtụ n'ime ndị ọrụ na ọhụụ ndị na-achọ ọrụ ndị na-achọ Ọrụ na Dubai City Gburugburu chọta ọrụ ruo ugbu a na Ọrụ na Dubai WhatsApp iche iche. Ọ bụ n'ihi na ị na-ewu ụlọ ọrụ Dubai nke ọtụtụ narị ụgbọ mmiri na-enye 250,000 Dubai ọrụ kwa afọ.
Ka ọ dịgodị, ndị isi si India, Pakistan, na Bangladesh kwaga United Arab Emirates maka ezigbo ụgwọ ọrụ. E kwuwerị, n'ihi ya, ndị a ndị ọghọm ghọọ ndị bi na UAE. Ebe ọ bụ na 1995 ha nwere ihe karịrị 60% nke ọnụ ọgụgụ obodo Dubai ma nke a na-eme obodo Dubai dịka obodo ukwu nke obodo maka google ọrụ ọkachamara ọrụ.
Ezigbo Eziokwu ma ọ bụ Ọ Bụ Ụzọ? Ndị bi na Dubai bara ọgaranya?
Klas kewara na Emirates bụ nnukwu, na ọtụtụ n'ime ndị kwabatara na-achọ ọrụ na Dubai kwa ụbọchị. N'ikwu okwu n'ozuzu, ndị ọrụ dị ala na-ebi ma na-arụ ọrụ mgbe ụfọdụ 12h ruo 16h kwa ụbọchị. Na ọnọdụ jọgburu onwe ya, ụlọ dị ọnụ dara ọnụ ma rie nri na-esighi n'oge. Gbalịsie ike ịbụ onye a mụrụ otú a ebili dika Emiratis were ọnụ ụlọ ha dị oke ọnụ, agụmakwụkwọ maka ụmụ ha na ndị ọrụ ahụike onwe ha na-akwụ ụgwọ ngwa ngwa na ụlọ elu ndị mba ọzọ ndị na-akwụ ụgwọ dị mma.
Enweghị nri na ebe obibi mgbe ị na-achọ Ọrụ na Dubai City
Foto magburu onwe ya Sheikh Mohammed bin Rashid
Onye isi na onye ọchịchị nke Dubai, na nwa ya Sheikh Hamdan, Crown Prince nke Dubai, were London Njem ụgbọ ala.
O doro anya na ọtụtụ ndị ndị bi na Dubai City karịsịa ndị si India na Pakistan. Na-ebi ndụ site na ọnwa rue ọnwa na ịkekọrịta ihe ndina iji belata ọnụ ahịa. Ọ bụ ihe nwute na, ọtụtụ ndị njem nlegharị anya ahụghị nke ahụ mgbe ha gara Dubai. Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ mmadụ nọ na UAE nwere nkwenye na ihe ga-aka mma ma ha chọta ọrụ ka mma. Ma ọ bụrụ na ịchọta nke ọma Job na Dubai ọ ga-eme.
Jiri Metro ma ọ bụ British Straightaway aha: Tube
Iji maa atụ, ọ bụrụ n’ijighi ụgbọ ala ma kpebie iwere Metro gaa njem na 99% ị ga - ahụ ọdịiche dị ukwuu. N'ọnọdụ nke ọ bụla, ọ bụrụ na ịchọghị, isi ahụ ga - achọta gị. Ihe kacha njọ ị nwere ike ime na UAE ?. Ndị mmadụ njem ịchọta ọrụ na Dubai ma nwee obere ego, enweghị ego, enweghị njikọ, ọ dịghị ihe ọ bụla. Ozugbo a, nhọrọ kachasị mma ha nwere bụ ego dị mfe, ihe oriri bụ isi, na ụlọ ma na-ebi n'ụzọ ọjọọ.
Ọrụ na Dubai - Gaa Dubai na Caremalite Nlekọta na UAE
Soro ozi na UAE
site Ike Ya Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Ndi ndu ndu ndu Dubai ma obu onye na esoro?
Na-eme ememe ndị na-arụ ọrụ nke ọma/ mmalite na UAE + Arab World.
b. Ịmepụtawanye ihe ọmụma banyere mkpa ọ dị Ụlọ ahịa na Dubai Mall.
c. Ndị na-agba ume na-agba ume ka ha bụrụ ndị nlereanya iji kọọrọ ha akụkọ ha na omume ha kacha mma.
d. Ịzụta ike nke Umu SMEs ndị na-achọ ọrụ na mpaghara ụwa ndị investors.
e. Ịmepụta ọdịbendị nke nghọta, ịchịkwa ụlọọrụ, na ịmekọrịta omume kacha mma.
INJNUMX Dubai na-anọchi anya ya
Ndị robots nke Dubai na-anọchi ọrụ ụmụaka n'ụzọ iwu na-akwadoghị n'ịsọ ọsọ kamel. Nke ahụ bụ ozi ọma na Middle East.
Ruo ugbu a, asọmpi Kamel na United Arab Emirates bụ egwuregwu a ma ama nke ukwuu, nke yiri ihe egwuregwu football bụ nke US na hockey na Canada. Nyere nha nke kamel, naanị ụmụaka nwere ike iso na-azụ ha. Kama na-anabata ndị bi na Dubai tomụaka isonye. Enwerela nsogbu n’oge gara aga inwe ụmụaka izubata iwu na-ezighi ezi bata n’ime obodo ịbanye kamel.
Otu n'ime ihe ọma dị na UAE bụ malite ịrụ ọrụ na ibi na Dubai.
Obodo di na Dubai City The Lamborghini Huracán kama kamel
Ndị isi obodo Dubai City na-eji ezi echiche abịa mgbe niile Iji gosi na Lamborghini Huracán LP 610-4 na-agbanye aka na Gallardo kachasị mma. Ndị ọzọ nke ụwa na-emesị jidere okwu nke kameel ma jiri echiche ọhụrụ bịa. Debe ya maka ọtụtụ akụkụ na UAE.
Lamborghini na-efu: $ 233,985 - $ 325,000 (e mere atụmatụ)
Gọọmentị Dubai na-ewepụta ihe ga-enye nsogbu na Dubai. Robots ma ọ bụ naanị ụgbọala Lamborghini. Ofgwọ nke robot ahụ bụ ebe ọ bụla site na $ 500 ruo $ 10,000. FUEL EFFICIENCY 9.0 - 19.6 l / 100km. Na kwa ị nwere ike ịchọta ya na India na Mumbai.
Gọọmentị dị na UAE na-ewu obodo a na-achịkwa ihu igwe
Nke ahụ ga - abụ 1.50 ugboro nke Paris. Nke ahụ dị ịtụnanya. Na Dubai, ị nwere ike ịchọta ọtụtụ mba, dịka ọmụmaatụ, Ndị India na ndị ọrụ Iranians.
Ọrụ 2020 n'ihu expo Dubai na-eme atụmatụ iji wuo obodo a na-achịkwa ihu igwe. Dubai City ga-enwe 3.95 km² n'ogo ya na ugbo elu nke ikuku jikọtara ebe dị iche iche n'ime obodo Dubai. Dị ka ihe atụ, Paris nwere mpaghara nke nanị 1.02 km². Maka ozi ndị ọzọ, ị nwere ike google ya.
Obodo dị na Dubai City ruo 2018 enweghị adreesị ahụ
Na Dubai City, e nweghị zip Codes ma ọ bụ ọbụna koodu mpaghara ọ bụla na enweghị koodu nzi ozi !.
N'ihi na ezumike na-eto eto ọrụ ọnụego Dubai. Ọrụ ntinye aka na mobile na-eto eto, ọ nweghị usoro nhazi usoro. Kama ijikọ ihu na ihu ụzọ kachasị mma ị ga-esi bịaruo HR recruiters na Dubai bụ iziga òkù online. Adreesị adreesị adịghị na akara ozi nzipu ozi, e nwere ebe pụrụ iche pụrụ iche ebe ndị ọpụpụ mba ọzọ nwere ike iseta map ma ọ bụ dee ntuziaka ụfọdụ. Nye ndị ọzọ ka ha nyere ha aka ịga ebe dịka: "Mgbe ị gafere ebe a na-ere ahịa ọcha, ọ bụ n'okporo ụzọ nke abụọ ruo n'aka ekpe, ọnụ ụzọ uhie."
Tom 'Cruises' site na Dubai maka MI 4
N'ọtụtụ ụlọ ahịa Dubai dị iche iche na-enweghị ụgwọ ọrụ dị mma a na-akwụ kwa ọnwa na akaụntụ ego gị. Ị gaghị akwụ ụgwọ ọ bụla ụtụ isi ọ bụla na-enweta mgbe ị Mee ego gị na ụlọ ọrụ Dubai. Nke a na-adọta ọtụtụ nkwenkwe ụgha dịka Tom Cruise bịa Dubai. Na echiche nke ịchekwa ego dị mma (ego efu nke Dubai) na obere oge. Ebe ọjọọ ahụ na-adịkwa mfe ịnweta nnukwu ego ị na-esighị na Dubai.
Gburugburu obodo Dubai: ibu karịa ndụ
Ihe mgbaru ọsọ 2020 Dubai bụ Expo Expo bụ iji bụrụ ebe kachasị ukwuu na Middle East. Na Expo ga-akasị mma maka ihe niile. UAE hotels kachasị mma n'ụwa. Ọ dị mma karịa ebe ọ bụla ọzọ n'ụwa. Obodo Dubai nwere ụlọ kacha mma n'ụwa ma na-agụnye Burj Al-Arab.
Ingslọ na Dubai bụ ụlọ kachasị ogologo na mbara ala. Burj Khalifa kwuru banyere ikwughachi ya bụ ụlọ nkwari akụ dị ịtụnanya ileta No.1 maka ịbanye na Middle East. O doro anya na a pụrụ ịhụ ụlọ elu Burj Khalifa site na 95 kilomita site na ebe ị na-eguzo.
Dubai City Area: Maa Ịhụnanya UAE
N'elu nke ahụ, Dubai City Mpaghara nwere nnukwu ụlọ ime ụlọ na Middle East, ha nwekwara nnukwu akwarium na GCC. Isi iyi kachasị ukwuu na-akpaghị aka nke mmadụ, ụlọ nkwari akụ kachasị ogologo n'ụwa, ọdụ ụgbọ oloko kacha ogologo na Abu Dhabi. Ma ama ama d ị baa ama n’ime ụlọ ịwụ ahụ n’etiti Dubai City center. Ọzọkwa na ụlọ ọrụ anyị, ị nwere ike ịghọ Gbanye Blogger na Dubai ma dee banyere Dubai City dị ịtụnanya.
Ọ bụrụ na ịnweta nhọrọ a gaa leta dị ka onye ọpụpụ ma ọ bụ njem nleta biko gaa na obodo a bụ ihe pụrụ iche na ya bụ naanị Gaa lee! Ma ị hụrụ Arabs n'anya ma ọ bụ, na agbanyeghị Dubai ga-ahapụ echiche pụrụ iche na mmadụ niile. N'aka nke ọzọ, anyị na-adụ ndị na-achọ ọrụ aka. N’iburu nke a n’uche, i kwesịkwara tinye CV na Naukri Gulf a n'elu ọrụ na Dubai.
Dubai City Mbanye n'ọrụ n'ime 2019